Isixwayiso somhlaziyi ngolukaMalema | IOL Isolezwe
Isixwayiso somhlaziyi ngolukaMalema
Isolezwe / 13 July 2012, 4:04pm /
UMHLAZIYI wezepolitiki uthi uma i-ANC ingavumela ingcindezi yalaba abafuna kubuyiswe uMnuz Julius Malema kuKhongolose kuyobe ubuholi bukaMengameli Jacob Zuma buziphendule inhlekisa. Lapha amalungu e-ANCYL abemasha eThohoyandou ngaphandle kweChrist Worship Church obekwenzelwe kuyona isifundo ngoDkt Nelson Mandela kanti badabule nezikibha ezinobuso bukaZuma. Isithombe: DUMISANI SIBEKO
UMHLAZIYI wezombusazwe uMnuz Zakhele Ndlovu uxwayisa ngokuthi uma i-ANC ingavumela ingcindezi yabalandeli bakaJulius Malema yokuthi abuyiswe kuKhongolose lokhu kuyokhomba ukuba buthaka kobuholi bukaMengameli Jacob Zuma.
UNdlovu ukusho lokhu ephawula ngesigameko saseLimpopo sokuzama ukuphazamisa isifundo sokuhlonipha uDkt Nelson Mandela kulandela ukushaywa kweqeqebana le-ANCYL eLimpopo elingene ngesidlozana kulesi sifundo.
La malungu ophiko lwentsha atheleke ehholo laseShayandima iChrist Worship Church la bekunalo mcimbi uMengameli Jacob Zuma engakafiki ephethe izingqwembe ebezinemibhalo ethi akubuyiswe uMalema kuKhongolose.
“Uma kungagcina ngokuthi i-ANC izithole isisesimeni lapho iphoqeleka ukuthi iyibuyekeze kabusha indaba kaMalema ngenxa yalezi zidubedube, kuzokhombisa ukuthi ubuholi obukhona kuKhongolose bubuthaka futhi kunganika amandla nalabo baholi asebecashile abafuna uMalema abuye bese kukhishwa uZuma eMangaung,” kusho uNdlovu.
Uthe osekudingeka kule nkinga wukuthi ubuholi be-ANC buhlale phansi ne-ANCYL kuxoxiswane ukuze kuphele lezi zigameko ngoba sezidala ukuthi abantu abaningi ikakhulukazi abadala bagcine sebesaba ukuhambela le mibuthano ngoba abazi ukuthi baphephe kangakanani.
UNdlovu uthe lesi sigameko siveza isithombe sokuthi kunabantu asebencamele ukuthembeka kumuntu kunaseqenjini.
Uthe phakathi kwalaba bantu abebezophazamisa umcimbi wangoLwesibili kungenzeka ukuthi iningi labo alinabo ngisho ubulungu be-ANC kodwa yingoba bezithandela uMalema bezwelana naye.
Lokhu bekungesikhona okokuqala ukuthi kwenzeke njengoba nase-Western Cape uZuma aphazanyiswa yiqeqebana lamalungu e-ANCYL elalifuna ukuthi kubuyiswe uMalema.
Kulowo mbuthano kwagcina kulimale kabi nomthwebuli wezithombe wakwaSABC kanti nakhona kwaqhuma iqupha kwamanye amalungu kaKhongolose nawophiko lwentsha.
Ngemuva kwalokho kwaphinde kwaphazanyiswa inkulumo kaMnuz Collins Chabane onguNgqongqoshe ehhovisi likaMengameli owayekhuluma emcimbini wosuku lomgubho wentsha wangoJuni 16.
Khonamanjalo kuthiwa kushone owesifazane okusolwa ukuthi waxhelwa yisisi esikhalisa unyembezi ngesikhathi kuhlakazwa ababezama ukudunga umcimbi waseLimpopo.